Umbuzo CLS DC-10-30F repaint
2 iminyaka inyanga 1 edlule #431 by Gh0stRider203
Noma ngengozi uzimisele ukwenza repaint ngaMi, ngokuba CLS DC-10? Kuyinto repaint silula kodwa mina ngempela kwenza ungazizwa sengathi usaphatha ke, ngokwethembeka. Ngiye enamathiselwe a shot kufanele sibheke indlela, kanye isithombe ne 2 decals kuso.
Uma othile wiling ukwenza lokhu Ngingathanda bawazisa kakhulu ke
the painkit lutholakala lapha: www.commerciallevel.com/misc/DC10/DC10_paintkit.zip
2 iminyaka inyanga 1 edlule #432 by Dariussssss
Ngenzé cishe 100 repaints ngoba FlightGear indiza sim, kodwa FSX repaints ziphelelwe league lami. It ngempela ibukeka iyinhle.
2 iminyaka inyanga 1 edlule #436 by Colonelwing
Impela umuntu unekhono ukwenza umsebenzi ,,, inkontileka enkulu Ngithi!
2 iminyaka inyanga 1 edlule #437 by Gh0stRider203
Engingathanda othumele kwaba nje omunye umzimba ogcwele, okuyinto ucezu ikhekhe ... kodwa kukhona okuningi nokwengeziwe.
I ESIPHELELE engumzimba owodwa has zonke izingqimba ehlukahlukene endaweni PSD (okuyinto PSD KUPHELA kit).
yilokhu ifolda libukeka uma unzip ke ... lol prnt.sc/ej7rar
I got isineke kabusha ukwenza izingcezu fuselage lol
Isikhathi ukudala page: 1.470 imizuzwana